Siyakwamukela ku-"Wine Glow"
Wintergreen Resort, Virginia, i-United States
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Jeff
Woza ujabulele ubusuku obungenakulibaleka ngomlilo ovuthayo wezinkuni ezintabeni zaseVirginia. Itholakala ku-18th fairway futhi phakathi nemizuzu nje yemithambeka yokushushuluza, i-Edge Restaurant/Ibha, ukuhamba ngezinyawo, kanye ne-Spa endaweni yokungcebeleka ehlonishwayo yaseWintergreen. Ukushushuluza, ukubhobhoza, ukuqwala izintaba, igalofu, ithenisi, ukubhukuda, noma ukuhlola enye yezindawo eziningi eziphuzwa utshwala, amawayini, ama-cideries, noma amasimu emizuzwini embalwa yokushayela. Mhlawumbe vele uphumule emphemeni wakho wangasese obheke inkundla yegalofu ngenkathi ujabulela isiphuzo sakho osithandayo noma incwadi.
Le condo ekhanya kakhulu futhi ebekwe kahle inikezela ngegumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yomlilo yezinkuni namafasitela amakhulu abheke ku-18th fairway. Kukhona i-tv kanye namamuvi nemidlalo eminingi engadlalwa eziko. Igumbi lokuhlala liqukethe usofa wesigaba kanye nesihlalo sesikhumba ne-ottoman. Ngaphandle kwegumbi lokuphumula, indawo yokudlela inetafula lokudlela eliyindilinga elinezihlalo ezine. Ukuphuma endaweni yokudlela ngokusebenzisa iminyango yengilazi enkulu eshelelayo kuholela endaweni yedekhi enezihlalo ezi-4 ezigxunyekiwe kanye netafula eliyindilinga ozolisebenzisa. Kukhona negrill kagesi edekhini wamukelekile ukuyisebenzisa. Izitsha ze-BBQ zitholakala ekhabetheni lasekhishini. Ikhishi lakho eligcwele ngokugcwele lihlinzeka ngezinto zensimbi engagqwali, zonke izinto zengilazi kanye ne-flatware ozoyidinga, inqwaba yezitsha kanye nebhodwe lekhofi (elinikezwa ikhofi), i-toaster, i-blender, kanye nebhodwe lokugezela. Siphinde sihlinzeke nge-microwave popcorn, itiye, nezinongo. Igumbi lokulala lezivakashi linemibhede emibili enamashidi nemicamelo ethokomele. Igumbi lokulala elikhulu linombhede olingana nenkosi enamashidi, imicamelo, isihlalo esisekhoneni elithokomele, nendawo yokusebenzela yedeski. I-master bedroom nayo ine-sanitizer yomoya edala umsindo omhlophe futhi inciphisa izinto ezingezwani nomoya. Ngaphandle kwegumbi lokulala elikhulu kunegumbi lokugezela elikhulu elinendawo yokugezela ehlukile enezindawo zangasese ezengeziwe ezitholakala ngaphansi kukasinki okungenzeka ukhohlwe ukuwupakisha, indlu yangasese, kanye nobhavu/ishawa. Igumbi lokugezela eligcwele linikeza usinki, indlu yangasese kanye neshawa. Womabili amagumbi okugezela afika ne-shampoo yamahhala, i-conditioner, nokugeza umzimba, futhi womabili amagumbi okugeza anamalambu okushisa amahle kakhulu ebusika. Okokugcina, lesi sakhiwo sinewasha egcwele usayizi ogcwele kanye nesomisi esinama-washer pods namashidi okomisa abekwe eshalofini elingenhla.
Itholakala entabeni ngaphakathi kweWintergreen Resort ezuze umklomelo. I-Fairway Woods igama lamakhondomu futhi ahlinzeka ngendawo yangasese ku-18th fairway ye-Devils Knob Golf Course phakathi nemizuzu ukusuka emithambekeni yokushushuluza, amashubhu, izindlela zokuhamba izintaba, ithenisi nokubhukuda.
Ngingafinyelelwa ukuze ngikusize kunoma yimiphi imibuzo ongase ube nayo kokuthi jeff_seiders@yahoo.com.